Fitantarana Manokana: Fandriampahalemana Afovoany Atsinanana 2007 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jona 2017 18:35 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Español, বাংলা, Deutsch, English
Nibahana tamin'ny lohatenim-baovao iraisampirenena nandritra ny dimampolo taona mahery ny Resaka Afovoany Atsinanana. Anjaran'ireo mpiserasera ao amin'ny faritra ankehitriny ny mampiseho sy manampy ny fomba fijerin'izy ireo ny zava-mitranga mikasika ny fiainan'izy ireo, ny fiarovana sy ny fitonian'ny firenena izay onenan'izy ireo.
Ho hisy fandriampahalemana ve ao Afovoany Atsinanana? Efa nampiseho fifampiraharahana fandriampahalemana tao Etazonia indray tamin'ny faran'ny volana Novambara ny mpitarika ao Isiraely sy Palestina, saingy tsy misy ny porofo amin'ny tena fivoarana.
Ahoana no fihetsik'ireo olom-pirenena ankapobeny? Inona no holazain'ireo olona eny ifotony? Nandritra ny andro vitsivitsy lasa, ambony ny fihetseham-po ary naneho ny fahasorenany, ny fanantenany, sy ny traikefa voalohany tamin'ny lalana lava sy ratsy mankany amin'ny fandriampahalemana ireo bilaogera ao amin'ny faritra Afovoany Atsinanana.
Nanangona ireo lahatsoratra ireo tamin'ny pejy Fitantarana Manokana ahitana vaovao mivantana mikasika izay nosoratan'ireo bilaogera ao amin'ny faritra, Bahrain sy Maraoka momba ny fanantenan'izy ireo ho amin'ny hoavy izahay. Nahitana tsy fahatokisana ka hatramin'ny fanantenana ireo fihetseham-po, maro ireo fanehoan-kevitra mampitovy ireo bilaogy ireo – ny fiahiana ny ampitso. Ahitana rohy mankany amin'ny fitantarana antsipiriany nataon'ny Global Voices momba ny fanehoan-kevitr'ireo bialogera ihany koa ny pejy.
Tsy izay ihany. Nanatontosa vaovao mivantana eto ihany koa ny Reuters ankehitriny, manome feo ho an'ireo bilaogera ary eo am-panatontosana ihany koa ny fandraisan'anjaran'ireo fampahalalam-baovao mahazatra.